wedpages and Hostings — MYSTERY ZILLION
wedpages and Hostings
September 2009 edited October 2009 in Blog
အခု wedsite ရေးချင်သော..သူများ... အတွတ်ပါ။
wedsite တစ်ခုရေးတော ့မယ်ဆို..hosting လိုပါတယ်ခင်ဗျ။
hosting ကလည်း... free တွေ ကို စမ်းသုံးကြရတာပါပဲ။ လုံး၀မကောင်းပါဖူးခင်ဗျ။
free host တွေက တော်တော်တိုင်ပတ်ပါတယ်။ ဒုက္ခလည်းရောက်ရပါတယ်။
၀ယ်သုံးတဲ ့hosting တွေ သာ...ကောင်းပါတယ်။ ။
အဲဒါကြောင် ့..အသုံးလွယ်မယ် ့ဟာလေးတွေ ကို တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။
အခု wedpage တစ်ခုရေးမယ်။ hosting မသုံးချင်ဖူးဆိုရင်တော ့
ဒီမှာသွားပြီး register လုပ်ပြီး ရေးလို ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။
ning.com ကိုတော ့မပြောနေတော ့ဖူးနော်..သိပြီးသားတွေ ဖြစ်ကြမှာပါ
အဲဒီမှာလည်း သွားယူလို ့ရပါတယ်။ ။
ဒီမှာက တော ့...သုံးလို ့ကောင်းမယ့်free hosting ကို detail list လုပ်ပေးထားတာလေးတွေပါခင်ဗျ။ ။ သုံးဖူးသူတွေ ကိုယ်တိုင် rating လုပ်သွားတဲ ့
wed host တွေ ပါခင်ဗျ။ ။
TopTen Free Host တွေ ပါ။ ။
အောက်ပါလင့်မှာသွားကြည် ့ပါခင်ဗျ။ ။
နောက်တစ်ခု...အခြား wed host တွေ ကလည်း..ဘယ်ဟာတွေ ကောင်းလည်းစမ်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ ့...ဒီမှာ သွားကြည် ့ပါခင်ဗျ။
Detail နဲ ့သေသေချာချာ ပြထားပါတယ်။ ။
အဓိကကတော့ စျေးကြီးရင် ကောင်းတာပဲ..
အများအားဖြင့် Grid Server, Dedicated Server , VPS စသဖြင့် hosting အလိုက် ကွဲသွားပါတယ်..
ကျန်ခဲ ့တာ..အဟီး :D:D
၀င်မပြင်ချင်တော ့လို ့...ဒီမှာပဲ ရေးလိုက်တယ်။
တို ့လို wed host ဆိုဒ်များသည်...IP တစ်ခုကို သုံးခါပဲ register လုပ်ခွင့်ရှိပါသောကြောင့်
အနော်တို ့နိုင်ငံမှ..လုပ်ရင်...အဆင်မပြေပါခင်ဗျ။ ။ပြည်မ မှ တစ်ယောက်ယောက်ကို လုပ်ခိုင်းမှသာ
ရကြောင်းပါ...အနော်ဆို..ကလူပျိုကို လုပ်ခိုင်းတာ (မေ ့နေလို ့ပါတဲ ့) ကိုကြီးဒီ ကျတော ့(ညီရယ်
ကိုယ်ဘာသာလုပ်လိုက်ပါတဲ ့)...ကိုကြိးရသ ကျတော ့...(ဆိုဒ်လုပ်တာသေတော ့မယ်..ဒါလေးတောင်မသိဖူးလား..ကိုဘာသာလုပ်ဟွန့်:14::14:)ဆိုပြီး..ဟောက်တွားတယ်။
ဟင့်..၀မ်းနည်းလိုက်တာလေ ဟားဟ :D:D:D
နောက်ပြီး တော့Blog လုပ်နည်း..စာအုပ်လေး..ဒီမှာဒေါင်းပါခင်ဗျ။
အဲဒါဆို...သဘောပေါက်သွားပါလိမ် ့မယ်...ဘယ်လို လုပ်ရတယ်ဆိုတာ။ ။
ကဲ ့...ထပ်ပြောမယ်..ပျော်ရွှင်ပါစေဂျာ..အဟီး :D:D
ဟဲ့နင်က ဘယ်လိုလုပ် နာမည်ပြောင်းသွားတာလဲဟ။
ငါကတော့ Web အပိုင်းသိပ်မရလို့ ဘာမှဝင်မရေး တော့ဘူး။
အဓိကကတော့ စျေးကြီးရင် ကောင်းတာပဲ.. :d
ပုဂံနက် လည်းစျေးကြီးတယ်နော် :71:
hosting price တွေ က တော ့..သူ ့host တွေ မှာ...ပြန်ထားတယ်ခင်ဗျ။
သူစျေးနဲ ့သူပါပဲ အားလုံးကတော ့။ ။
Y3llowCak3 wrote: »
ပုဂံနက်ကတော့ မပြောတတ်ဘူး Local က provider တွေကို သိပ်မယုံချင်ဘူး အဟီး
ဇူးဇူး .. နင် လွဲ နေတာလား ငါ လွဲနေတာ လား တစ်ခုခုဘဲ..
ငါ ရဲ့ဂျီမေးလ် အကောင် ့တိုင်းကို byethehost မှာအကောင် ့လုပ်ထားတယ်
ရတယ် ... ဘာလို့တုံး ..
အော်..ဟဲ ဟဲ..နင်က..ဘာ proxy သုံးပြီးတော ့..အကောက်တွေလုပ်လဲ ဆိုတာ
ငါက မသိဖူးဆိုတော ့လေ...ဟွန် ့
လွယ်ပါတယ် ဟ . အခြား နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ဘော်ဘော်တွေ ကို အသနားခံလေ..
နင်ကလဲ လွယ်တာမှ :d
နင်ကလည်း ဟိုစတင်းတစ်ခုတောင်မ၀ယ်နိုင်ဘူးလား.. နင်သုံးမယ့် အင်တာနက်ကြေး ငါးလစာလောက်စုရင် ဟိုစတင်း၀ယ်လို့ရလောက်ပြီ.. ကြိုစုပြီး၀ယ်.. ပြီးရင် ငါးလတိတိ မသုံးနဲ့ တစ်နှစ်ကို ခုနှစ်လ သုံးလို့ရတော်ရောပေါ့..
တခြားဟာကောင်းမကောင်းတော့ မသိဘူး။ စိတ်ညစ်စရာတော့ ကောင်းမှာ သေချာတယ် )
ကျွန်တော် ဆိုရင် သူ့ဆီက ၀ယ်ထားတာပါ ဒိုမိန်းလည်း သူ့ဆီကပဲ ။
စျေးနည်းနည်း ကြီးသလိုထင်ရပေမယ် သုံးပျော်ပါတယ်
lunarpages က ဟာကို ၀ယ်တာ unlimited hosting နှစ်နှစ် ကို ၆၀ ၇၀ လောက်နဲ့ရတယ်
ဒိုမိန်း ဆိုရင် လဲ 15000 နဲ့ရပါတယ် နည်းနည်းတော့များတာပေါ့
:d ငါ့ညီ အစ်ကိုတော့ မင်းကို ကြော်ငြာပေးလိုက်တယ် ဟားဟား
hosting သုံးမယ်ဆို free hostingတွေ သုံးဖြစ်ခဲ့ရင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ back upလုပ်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ.. ကိုယ်တိုင်ခံရဖူးလို့ပါ...:2:
Free hosting က စမ်းရုံပဲကောင်းတယ်။ တကယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ free မသုံးနဲ့။ hosting ဝယ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့် site ကို တနေ့ လူဘယ်လောက်လာမလဲဆိုတာကိုလည်း စဉ်းစား။ lunarpages က တနေ့ လူ ၈၀၀ ကျော်ရင် မနိုင်ဘူး။ CPU usage over ဖြစ်ရော။ တနေ့ကို ဘယ်လောက်လာနိုင်မလဲ။ နောက်မှ ပြန်ပြောင်းရရင် စိတ်ကော လူကော ပင်ပန်းတယ်။ ကိုယ်တွေ့။ အခုတောင် lunarpages ကနေ ထပ်ပြောင်းရအုံးမယ်။ တနေ့ကို လူ ၂၀၀ လောက်ဆိုရင်တော့ lunarpages ကို recommend လုပ်တယ်။ supporrting က အရမ်းကောင်းတယ်။ တနေ့ကို လူ ၅၀၀ နဲ့ အထက်ဆိုရင်တော့ share hosting မဝယ်သင့်တော့ဘူး။
ဆရာ..ဆရာ...ကြော်ငြာခ ရရင် အနော့်ကိုလည်း နည်းနည်းခွဲပေးဦးနော် အဟီး......
ကျွန်တော်ဆိုဒ်လေးကို freehostia မှာ host ထိုင်ထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုမှာလည်း back up လုပ်ထားချင်ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။
ပြီးတော. ဖရီးရတဲ.ဟာတွေထဲမှာ ဘယ် host ကကောင်းလဲနည်းနည်းလောက်ညွန်းပေးပါ။
အစ်ကို ကျွန်တော် အဲ့ဒါ ကို ဖွင့်ဘူးတယ် ဒါ ပေမဲ့
သုံးရတာအဆင်မပြေဘူး အစ်ကို ကုတ် တွေဆိုရင် ကို့ဘာသာကို ရေးရတာ
template ပဲအလကားရ တာ အစ် ကိုရ
ကျွန်တော်လဲ ၀ယ်သုံးချင်တယ် ဒါပေမဲ့ ဘယ်လလိုလုပ်ရမလဲ မသိဘူး
အစ် ကို ပြီးတော့ co.cc မှာလဲ ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် ဒါပေမဲ့မရဘူး
အစ်ကို သိရင် နဲနဲ လောက်ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်
အစ်ကို ကျွန်တော့် အစ်ကိုလို co.cc နဲ့ domain တစ်ခုလောက်လုပ်ချင်ပါတယ်
ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ အစ်ကို ကျွန်တော် လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်
အစ်ကို reply ကို မျှော်နေမယ်နော်
မိမိ၀က်ဆိုက်အား ကိုယ်ပိုင် private အနေနဲ့ သုံးလိုသူများ ၊တစ်ခြားသူများ မိမိဆိုက်အား ၀င်မကြည့်နိုင်ရန် ၊ တစ်ချို့ ချစ်သူစုံတွဲများ ၀က်ဆိုက်ပြုလုပ်ထားပြီး နှစ်ဦးတည်း အသုံးပြုလိုသူများ စသဖြင့် အသုံး၀င်ပါတယ် ။ သူ့ ရဲ့ feature ကတော့ မိမိ၀က်ဆိုက်အား ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ password တောင်းခိုင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ် ။ password မသိသော မည်သူမျှ မဖွင့်နိုင်ပါဘူး ။ လုပ်နည်းကလဲ လွယ်ပါတယ် ။ ဒီနည်းကို http://www.easywamp.com/ ဆိုက်မှာ တွေ့ လို့ ကူးယူးဖော်ပြတာပါ ။ သူ့ ရဲ့ မူရင်းလင့်မှာလဲ တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ။ အောက်မှာပါ ။
လုပ်နညး်ကတော့ ပထမဦးဆုံး .htaccess နဲ့ .htpasswd ဖိုင် ၂ ခုပါတဲ့ zip ဖိုင်လေးကို အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ ။
>>> ဒေါင်းရန် <<<
ရလာတဲ့ဖိုင် ၂ ဖိုင်ထဲက .htaccess ဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီး အောက်ပါကုတ်အား copy / paste လုပ်ပါ ။
AuthName "Easywamp Server"
ပြီးပါက save ပြီး www(public_html) ထဲကိုထည့်ပါ ။ ဒီနေရာမှာ .htaccess ဖိုင်ထည့်ထားသောဖိုဒါအား password ခံစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မိမိက ဖိုရမ်ဖိုဒါထဲမှာထည့်ထားရင် ဖိုရမ်ကို ဖွင့်တာနဲ့ password တောင်းမှာပါ ။ အခုဆိုရင် www(public_html) ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့အတွက် မိမိဆိုက်တစ်ခုလုံးကို password ခံထားတာပါ ။
AuthName ဖြစ်တဲ့ "Easywamp Server" နေရာမှာ မိမိစိတ်ကြိုက်နာမည်ထည့်လို့ ရပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခု သတိထားရမှာက AuthUserFile C:\_EasyWAMP\_www\_.htpasswd ဆိုတဲ့ .htpasswd ဖိုင်ကိုထားရမဲ့နေရာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ကုတ်မှာဆိုရင် .htpasswd ဖိုင်ဟာ www folder(root) ထဲမှာ ထည့်ထားတာပါ ။ တကယ်လို့ မိမိက .htpasswd ဖိုင်ကို phpMyadmin ထဲကိုထည့်မယ်ဆိုရင် သူရှိတဲ့ဖိုင် directory ကို ညွှန်းပေးရပါမယ် ။ ဒီလိုလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ ။ AuthUserFile C:\_EasyWAMP\_www\_phpMyadmin\_.htpasswd
အဲဒီက,ကအဲဒီနေရာပါပဲ ။ .htpasswd ဖိုင်နေရာမှာတော့
ဆိုတဲ့ ကုတ်ကို copy / paste လုပ်ပါ ။
Username ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိမိစိတ်ကြိုက်နာမည်နဲ့ password နေရာမှာ မိမိစိတ်ကြိုက် password ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဥပမာ
PS : .htpasswd ဖိုင်အား .htaccess ဖိုင်နဲ့ ဖိုဒါတစ်ခုထဲတွင်ထားစရာမလို ။ သူ့ အား တစ်ခြားဖိုဒါတစ်ခုထဲမှာ ထည့်ထားတာက security အရ ပိုကောင်းပါတယ် ။
အခုဆိုရင် မိမိ၀က်ဆိုက်အား တစ်ခြားသူများ အလွယ်တကူမကြည့်နိုင်အောင် password ခံပြီးပါပြီး ။
notoriousfour wrote: »
ကို notoriousfour ရဲ.ဆိုဒ်က အထဲမှာ ဘာ host မှထိုင်ထားသေးရပုံမပေါ်ဘူးဗျ။ပြီးတော. blogspot ရှိလား။ရှိရင် blogspot နဲ.ချိတ်လိုက်လို.ရပါတယ်။အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်း ကျွန်တော်.ဆိုဒ်ထဲမှာ co.cc ကို host နဲ.ချိတ်ဆက်နည်း မြန်မာဘာသာနဲ.ရေးထားတဲ. ebook ရှိပါတယ်။making wordpress လို.ရှာလိုက်ပါ။အဲဒါလေးကိုဖတ်ကြည်.ပြီး ဘာမှားနေလဲရှာကြည်.ပါ။အဲလိုမှမဟုတ်ရင်လည်း [email protected] ကို ဂျီတော.ကနေအပ်လိုက်ပါ။ညဘက်အွန်လိုင်းတက်မှာပါ။ကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပေးပါ.မယ်။
co.cc မှာ ဘာကို ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားတာလဲမသိဘူးနော်.. သူက ဒိုမိန်းရောင်းတာလေ.. တစ်နှစ်တော့ အလကားပေးသတဲ့.. ၀ယ်မသုံးချင်ရင်တော့ အီးမေးလ်အက်ဒရက်စ် အသစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းယူရင် ရမလားဘဲ.. ကျွန်တော်တော့ လုပ်ကြည့်မလို့ စဉ်းစားနေတယ်.. co.cc လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ hosting တစ်ခု အရင်ရှာတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် wordpress တို့ bloger တို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အရင် လုပ်ပြီးမှ redirect လုပ်လဲရတယ်ဗျ.. ကိုယ့်ဟာကို မရေးချင်သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေတာပေါ့.. template တွေလဲရှိတယ်.။ စာတွေလည်း ရိုက်တင်ရုံပဲပေါ့..။ ဒါပေမယ့် personalize လုပ်ချင်ရင်တော့ ကုတ်နည်းနည်းရေးပေါ့.။ co.cc ကတော့ www.co.cc ကိုသွားပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ www.
.co.cc ဆိုပြီး အပေါ်မှာပေးထားတယ်. "
" နေရာကတော့ text box ပေါ့.။ အဲဒီ့မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နာမည်ထည့်ရှာရင် Available ဖြစ်ရင် ယူလို့ရပါပြီ...
သူက ဒိုမိန်းရောင်းတာလေ.. တစ်နှစ်တော့ အလကားပေးသတဲ့..
တစ်နှစ်ပြည့်သွားရင်လဲ personal လို့ပြောင်းပြီးဆက်လိမ့်နေလို့ရပါတယ်...
ကျနော်တော့ဒီလိုပဲ ဆက်လိမ့်နေတာ.. တစ်လကျော်သွားပြီ...:39:
ကျွန်တော်မေးထားတဲ. backup ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတာလေးဘယ်သူမှဖြေပေးကြသေးဘူး:2::2::2:
ဘယ်မှာ လုပ်ချင်တာလဲ ဟင် Backup ။
ကျွန်တော်ကတော ့...Database ထဲ မှာ..သွားပြီး Back up ထုတ်တယ်ခင်ဗျ။
ပြီးတော ့..ဆိုဒ်က နေ Backup တစ်ခု ပြန်ထုတ်တယ်...
အကို သွားလုပ်ကြည် ့ပါအုံး...အကို Host မှာ..အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျား။ ။
ဆော်ရီး ဂျာ..အနော် အွန်လိုင်းမတတ်နို်င်လို ့..၀င်ပြီးမဖတ်ဖြင့်ဖူး..အကို ဖြေရှင်းပေးတာ..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ။ :6::6::6: